Dadweynaha Somalida Ogadeeniya: Ma Halgan Bay ku Jiraan Mise Hardan Beeleed Bay ku Jiraan? – Rasaasa News
Jul 7, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Aqoontu in ay aduunka hogaamiso oo ay horumar u keentay cidii garasho lehiba way ogg tahay, gunimadu in ay dhibaato leedahay cidii ku jirtaa ogg, dadweynaha Somalida Ogadeeniyana way Ogg yihiin in Jwxo-shiil iyo Qabiil ku Jabhadka daba taagan in ayna halgan ku jirin.
Waxaa in badan maskaxdayda dib ugu soo laab laabatay, su,aal la waydiiyey Dr. Dolal oo ahayd, Dr. Dolal maxaad Maxamed Cumar oo la wada ogg yahay taariikhda uu ku lee yahay dhulka Somalida Ogadeeniya iyo halgankooda, shan bilood ka horna ka soo horjeeday maba,abaadida ururka Jwxo, aan horena xubin iyo kaadir midna u noqon, maxaad madax ugagga dhigateen Jwxo? Ilahow kuu naxariiso wuxuu yidhi “wanu ognahay wax uu yahay oo dhan, laakiin hal umbaanu ugu dhiibnay waa nin beeshiisa soo wada dagaal galin kara!”.
Waxaan hubaa in markii uu Dr. Dolal hadalkaa lahaa uu si cad u garanayey, waxaana uu ku xisaabtamayey in xubnaha iyo kaadirka ururka Jwxo uu cid walba ka awood badan yahay oo hadii uu hogaanku khaladamo ay sixi karaan. Laakiin waxaa uusan ku xisaabtamin in dadka cabsan Jwxo la cabsiin karo, waxyaalo kale oo aan dan u ahayn halganka malahayga isaga umabaa isku xisaabtamay.
Mabaadiida ururka Jwxo, waxaa uu ahaa aqoon kasta oo uu ruuxu lee yahay ruuxu, kolkba hadii uusan ahayn kaadirka ururka Jwxo, way adkayd in la,aamino. Waxaa xaaraan ka ahayd xubnaha ururka in lagu sheego arimo qabiil, waxayse ahayd wax caadi ah in la sheego qabiilada xubnaha ururka, iyada oo aan loola jeedin kala xigsasho balse loola jeedo is aqoonsi [Addresses].
Waxaa hanti u ahaa xubnaha ururka dhaqida sharciga Jwxo iyo kobcinteeda, waxaa kale oo ay dhalinyaradu isku aamini jireen in ayna guurba soo hadal qaadin inta ay halganka ku jiraan [Taflow iyo Ina Cisman-qaali]. Waxayna si xoog leh u rumaysnaayeen in ay ku dhintaan halganka dhexdiisa iyaga oo u arkayey sharafta ugu dambaysa ee uu xubinku yeelan karo [cali-food, kaafi, kayd].
Waxaa ururka ugu horeeyey tanfaraaruq iyo samaysasho saaxiibo hoose xiligii uu Jwxo-shiil xaaraanta ku yimid ururka [in aan khaladany maxaa Janaraala nala soo galay]. Arinta keenida Janaraalka hogaanka Jwxo waxaa eedeedda oo dhan dusha laga saaraa Eebe naxariis ha siiyee Dr. Dolaal, Dr. Dolal waxaa uu ahaa nin jecel in ay Jwxo wax noqoto oo ay u horseedo dadka iyo dalka Ogadeeniya wanaag. Waxaan xusuustaa kol aan ka qayb galayey shirkii Sweden Stokhom July 1994,shirkaas oo dhidibada loogu aasay in Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya ay sanad walba dal ku kulmaan si ay isu bartaan oo loo xoojiyo isku xidhnaanta Jaaliaaydka, erayo cabasho ah oo ku saabsanaa in halganka lagala qaybqaato ayaa waxaa ku jiray khudbadiisa [nin naafa ah, oo labo caruur ah oo naafo ah haysta, qaxooti ah, madow ah, muslin oo london degan ruux ka tabar yar ma jiro, halgankana cidi iiga horayn mayso, ee dadyahow halganka soo gala].
Arinta Janaraalka keentay in uu Jwxo madax u noqdo midaas ayey ahayd, xubnaha ururka Jwxo kuligood way ka naxeen, waxayna Dolal ku eedeeyeen in uu masuul ka ahaa keenista Jananka. Waxaa uu xubnaha kol walba odhan jiray sharci baynu leenahay, xiligiisa kolka la gaadho hadii loo arko in uusan ururka u wanaagsanayn waa la badali oo sharciga ayaa ogol [Jananku sharci ma yaqaan hotra].
waxaa kolkiiba soo baxday hoos ka guur aan la isku ogayn, waxaa cirka aaday xubno kaadiriin ah oo masuuliyado ka hayey dalalka Jarmalka, Sweden, Norway iyo Finlan, waxaana lagu badalay dad uu doonayey Jwxo-shiil in ay qabiil ku difaacaan. waxaa uu dirba bilaabay wax aan hore ururka looga baran oo ah reer Cabdile rag ha laga keeno reer Isaaq rag baan ka keenaye, waxaana fikirkaas dadka kula dhex wareegay xubno hore u ahaa Jwxo oo aan iyaga laftigoodu isweydiinin meeshu ma qabiil baa mise waa mabaadii.
Waxaa markiiba Jaaliyaadkii iyo unigtii Jwxo ee dalalka reer galbeedka soo buux dhaafiyey dad aad u badan oo hal beel oo uu Jwxo-shiil ku yidhi madax baa la iga dhigaye ii camira meesha inta aan joogo. Golayaashii ay ku kulmi jirtay Jwxo waxaa u batay hal beel oo kolka aad weydiiso mabaadiida Jwxo aan waxba ka garanaynin. Dukaamo ayaa la furay calamada lagu iibiyo oo laga ag furay meel u dhaw meelaha Jaaliyaadyadu ku kulmaan, haween iyo caruur laga dhaadhiciyey adeer ayaa maanta shirqabanaya ayaa meel walba is dhaafdhaafay. Waxaa cidhiidhi galay in ay waayaan meel ay ka hadlaan xubnihii golaha dhexe ururk JWxo, qaarbaaba ay wiilsha yar yari golayaasha u diideen in ay ka hadlaan.
War Jabhadu sow Jwxo ma ah, ma mid kalaa la sameeyey, waxaa kale oo Afrika laga soo dhoofiyey dad aftahano ah oo intooda badani ay haween yihiin si ay dadka u kiciyaan oo ay lacag u uruuriyaan, oo ay u yidhaahdaan Ogadeeniya ha xorowdo. Qaarbaaba caruurahoodii dayacay intay haween kale u adeegayeen oo ay Afrika ka keenistooda ku mashquulsnayeen.
Jwxo-shiil waxaa uu samaystay maxmiyad qabiil oo isku qoofalan oo dabada la gashay xukuumada Eritariya, xubnaha ururka Jwxo oo kuligood marka laga reebo saddex mooyee ahaa ma yeedhaan, waxay dantu ku kaliftay in ay caruurtooda Iskoolada iska gaystaan kolka shirka looga yeedhana ay yimaadaan, waa yaab xaaskiisa ayuu ka dhaadhiciyey in ay lacagah ururiso, balaayo badanaa xaasku soo kay ka carari jireen meesha uu ninkoodu joogo.
Waxaa la waayey sharci Jabhadeed, xubnihii Jwxo waxaa ay noqdeen qaar maciibo ah iska daba socda iyo qaar isku dayey in ay ka dhigaan halganka uu beesha siiyey. Xubnaha damcay in ay ka ridaan halganka ma ayna soo kaxaysan beeshooda ee waxay damceen in ay sharciga kula dagaalamaan goormaa sharci ugu dambaysay Jwxo. Waxayna gacantooda u quudheen Jwxo-shiil iyo beeshiisu in ay qudha ka jaraan halgame Dr. Dolal oo ay beeshiisu diiday in ay gacan ka siiso soo celinta sharciyada Jwxo.
Qaaraankii waa uu istaagay, sheeko shuucidii hunguri xumada Jwxo-shiil way dhamaatay, dadweynihii way kala dhuuntaan oo dhalsho laysu salaamo way dhamaatay.
Hadaba, halgankii ay ummada Somalida Ogadeeniya lahayd ee ay Jwxo horseedka ka ahayd oo ay hore beelo badani ugu boggi waayeen oo ay iskaga hadheen, ayey kuwii ugu dambeeyey darmadooda ka laabteen.
Ummada Somalida Ogadeeniya wax walba wayday Jwxo-shiil ayeyna u haysataa khasaaraha gaadhay halganka, hadaba, Su,aashaydu waxaa weeye Jwxo-shiil miyuu faa,iiday mise wuu khasaaray?